गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरले जोखिम : साबुनपानी नै ‘हितकर’ – Deurali News
धेरैजसो अवस्थामा हातबाटै भाइरस संक्रमण हुन्छ। आफू होस् या अरूमा। त्यही हातलाई संक्रमणरहित बनाउन घसिने स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन (मेथानल मिश्रित) रहेछ भने के होला ? त्यसमाथि बच्चाको हातमा पर्‍यो भने ? यो जिज्ञासामा चिकित्सकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
नेपाल औषधि व्यवस्था विभागले विषाक्त स्यानिटाइजर कहाँ-कति छ भनेर लेखाजोखा गर्न सकेको छैन। सीमित साधनस्रोत र जनशक्तिका कारण अनुगमन गर्न नसक्दा बजारमा गुणस्तरहीन उत्पादन छ्यापछ्याप्ती छ। कतिपयले थाहा नपाएरै विषाक्त स्यानिटाइजर घरका कोठा–कोठामा सजाएका छन्। उत्पादक कम्पनीले स्यानिटाइजरको लेभलमा मेथानल मिसाइएको उल्लेख नगरी बिक्रीवितरण गरिरहेकाले सचेत हुन विज्ञको सुझाव छ।
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरका कारण कतिपयको छालामा एलर्जी देखिएको छ। डा. काफ्लेका अनुसार अमेरिकामा पनि मेथानल मिश्रित स्यानिटाइजर प्रयोग नगर्न सरकारले आह्वान गरेको छ। ‘मेथानल पेटमा पुगेपछि बान्ता हुन्छ। रक्सी बनाउँदा पनि मेथानलको प्रयोग हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘रक्सी खाएर कसैको ज्यान जान्छ भने त्यसको कारक मेथानल हो।’
कोरोना त्रासका कारण पटक–पटक स्यानिटाइजर दल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. अनन्त अधिकारीका अनुसार, पटकपटक स्यानिटाइजर घस्नु पनि मानसिक समस्या हो। यसलाई अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर (ओसीडी) भनिन्छ।
२० सेकेन्ड हात धोऊँ
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसका साथै अन्य सरुवा रोगविरुद्धको लडाइँमा साबुनपानीको प्रयोग प्रभावकारी हुने जनाएको छ। हात धुँदा औंलाको बीचमा, हातको अगाडि एवं पछाडि र नङलाई राम्ररी धुनुपर्छ। जुन सबैभन्दा सस्तो र सजिलो छ।
युनिसेफले पनि बगिरहेको पानीमा हात भिजाउने, मनग्गे साबुन लगाउने, हत्केलाको पछाडि, औंलाको बीच र नङलगायत सबै भागमा कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म मिच्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। बगिरहेको पानीमा हात पखाल्ने र सफा कपडा वा एकपटक मात्र प्रयोग गरिने तौलियाले हात पुछ्ने हो भने कोरोना भाइरसको अवशेष नष्ट हुन्छ।
साबुनपानीले हात धुने कुरा ओझेल परेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनको ठम्याइँ छ। ‘सफा पानी छ भने साबुनले हात धुनु सबैभन्दा राम्रो हो। साबुन र सफा पानी नभएको अवस्थामा विकल्पमा मात्र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने हो’, डा. पुन भन्छन्, ‘विज्ञापनका कारण साबुनपानीले हात धुने कार्य ओझेलमा पर्‍यो। स्यानिटाइजरको प्रयोगले महŒव पायो।’ संगठनले पनि कोरोना भाइरसबाट बच्न बेलाबेलामा साबुनपानीले मिचीमिची हात धुने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ ।
कुलमानको कार्यकाल सकियोः उपकार्यकारी निर्देशक शाक्यको सम्भावना
खाद्यान्नको भाउ किलोमै ३७ रुपैयाँ बढ्यो
कित्ताकाटको यथार्थ !
September 12, 2020 Deurali News 0
दोश्रो सिमरा महोत्सबमा पौष १२ गते लगायतको प्रस्तुति हुदै रबि रिमाल विश्व नेपाली दिपक बज्राचार्य एण्ड रिदम ब्याण्ड लगायतले प्रस्तुति दिदै
December 26, 2018 Deurali News 0